Noocyo kala duwan oo suuxin iyo kabuubyayn ah
Läs artikeln Noocyo kala duwan oo suuxin iyo kabuubyayn ah
Suuxin iyo qallin - Noocyo kala duwan oo suuxin iyo kabuubyayn ah
Ereyada narkos iyo anestesi waa isku macne af soomaaligana waxay ku yihin suuxin ama dareen beel. Marka qalitaan ama baaris la samaynaayo waxaa la isticmaalaa noocyo kala duwan oo wax lagu suuxiyo ama lagu kabuubyeeyo. Nooca la isticmaalayo wuxuu ku xiran yahay ilmaha dádiisa, qalitaanka la samaynaayo inta uu léegyahay iyo ilmaha xaaladdiisa. Gòaanka iyo masuuliyadda nooca la doranaayo waxaa qaadaya taqtarka wax suuxiya ka dib marka uu waraysto waalidka ilmahana la kulmo suuxinta ka hor.
Suuxin guud aad bay caadi u tahay taasoo micneheedu yahay in ilmaha la suuxiyo gebi ahaantii iyo asagoo loogu daro daawo xanuun jebiso ah. Suuxinta noocaan ah waxaa loo sameeyaa iyadoo ilmaha xididka looga mudaayo ama iyadoo gaas ah uu neef ahaan u qaadanaayo. Si aynan suuxintii uga bixin ayaa hadba daawo hurdo ayaa xididka laga siiyaa ama gaaskii ayaa lagu sii wadaa iyo weliba daawo xanuunka jebisa.
Suuxin qayb korka ka mid ah
Suuxin qayb korka ka mid ah waa loola jeedaa daawada suuxinta lagu mudo qayb korka ka mid ah oo acsaabtu ku badan tahay. Taasi waxay keeneysaa in inta acsaabtaasi gaarto oo dhan inay suuxdo. Suuxinta noocaan ah waxaa ilmaha la siiyaa markay hurdaan. Ilmaha waxaa loo siiyaa suxinta noocaan ah in ay dhamaystirto suuxuntii guud iyo si ay xanuun jebiso ugu noqoto qalitaanka ka hor iyo ka dib. Nooc ka mid ah suuxinta qayb korka ka mid ah waa marka dhabarka daawada looga mudo ama dhabar suuxinta.
Suuxin qayb kooban oo korka ah
Suuxin qayb kooban oo korka ah waxaa loola jeeda marka daawo wax suuxisa korka laga mariyo meel la rabo in la suuxiyo ama lagu mudo haraga/maqaarka hoostiisa lagu mudo. Ama kor ha laga mariyo ama haraga hoostiisa ha lagu mudee waxay keeneysaa in acsaabta ay taabataa ayna daren gudbinayn meeshiina ay kabuubyooto. Nooc ka mid ah suuxintaas waa EMBLA-kräm oo ilmaha la siiyo marka la doonayo in xididka laga mudo. Ilmaha waxaa loo siiyaa suxinta noocaan ah in ay dhamaystirto suuxuntii guud iyo si ay xanuun jebiso ugu noqoto qalitaanka ka hor iyo ka dib.
Suuxin iyo qallin
Suuxinta caruurta iyo dhallinyarada da´doodu u dhaxayso
U diyaar garowga suuxinta
Qaybta baraarugidda – soo naaxidda
Goorma sideese u wargelinayaa ilmahayga?
Naaseexo suugaan ku saabsan
Talooyin ku saabsan buugag waalidku akhrin karo
Talooyin ku saabsan buugaag ilmuhu akhrin karo